Fahasamihafana eo amin'ny HVGA sy WQVGA | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny HVGA sy WQVGA | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / teknolojia / elektronika / singa / fahasamihafana eo amin'ny HVGA sy WQVGA
3 aprily 2011 Narotsak'i Olivia
HVGA sy WQVGA dia roa amin'ireo fampifangaroana ny haavony sy ny sakan'ny fanapaha-kevitra fampisehoana sary amin'ny mpanara-maso ny solosaina sy ny efijery fampirantiana ireo fitaovana finday toy ny finday. Ny teny toy izany dia nanjary fahita tamin'ny endrika famaritana izay navoaka isaky ny misy fitaovana elektronika vaovao toy ny solosaina finday, solosaina solosaina na finday finday alefa amin'ny tsena. Mety misy fitambarana haavo sy sakany tsy tambo isaina, ary ny sasany amin'ireny dia nekena ho fenitry ny indostria ary nomena fanafohezana hahafahan'ny olona mahalala ny refy raha vao mahita ireo fanafohezana ireo. HVGA sy WQVGA dia fanafohezana roa toy izany. Andeha hojerentsika ny maha samy hafa an'ireo teny roa ireo.
HVGA, antsoina koa hoe antsasaky ny haben'ny VGA, ny pikantsary eto dia manana tahan'ny lafin-javatra 3: 2 (480X320 teboka), tahan'ny 4: 3 (480X360 teboka), tahan'ny lafiny 16: 9 (480X272 teboka), ary 8: 3 aza refy (640X240 teboka). Ny tahan'ny lafiny voalohany dia ampiasain'ny mpanamboatra maro amin'ny fitaovany PDA. Misy fitaovana isan-karazany manatanjaka HVGA ary io ihany no vahaolana nipoitra tao amin'ny Google Android tamin'ny dingana voalohany. Ny fanapahan-kevitry ny HVGA dia matetika nampiasaina tamin'ny sary 3D tamin'ny fahitalavitra tamin'ny taona valopolo.
Ity dia antsoina koa hoe QVGA malalaka ary manana vahaolana mitovy amin'ny QVGA ary ny haavon'ny piksela dia mitovy ihany koa, saingy malalaka kokoa noho ny QVGA izy io. Ny fanapahan-kevitry WQVGA dia ampiasaina amin'ny telefaona finday misy fehin-kevitra toa ny 240X400, 240X432, ary 240X480. Modely malaza sasany mampiasa WQVGA dia i Sony Ericsson Aino, Samsung's Instinct, ary iPod's Nano an'ny Apple.
• HVGA sy WQVGA dia fanapahan-kevitra fampisehoana sary izay ampiasaina amin'ny fanaraha-maso solosaina sy finday
• Ireo dia roa amin'ireo fenitra indostrialy marobe raha ny amin'ny fitambaran'ny haavony sy ny sakan'ny fampisehoana amin'ny piksela
• Ny HVGA dia an'ny antsasaky ny VGA ary ny WQVGA kosa an'ny QVGA malalaka.
Fahasamihafana eo amin'ny Sensor sy Transducer Fahasamihafana eo amin'ny CCD sy CMOS Fahasamihafana eo amin'ny ATI Mobility Radeon sy ny Reguler ATI Radeon
Filed Under: Components Tagged Miaraka: 240X400 , 240X480 teboka , 480X320 teboka , tahan'ny lafiny , solosaina mpanara-maso , fampisehoana fanapahan-kevitra , efijery fampisehoana , antsasaky ny haben'ny VGA , HVGA , telefaona finday , QVGA , QVGA malalaka , WQVGA
Tsy maintsy misy ny fahasamihafana
Fahasamihafana eo amin'ny orbital 1s sy 2s
Fahasamihafana eo amin'ny maodelim-bidy sy maodely fanombanana
Fahasamihafana eo amin'ny Isotonic sy Isosmotic
Fahasamihafana eo amin'ny proteinina A sy ny proteinina G.